I-American Civil War Colonel Robert Gould Shaw
URobert Gould Shaw - Ubomi bokuqala:
Unyana wezidalwa eziqhaqhiweyo zeBoston, uRobert Gould Shaw wazalwa ngo-Oktobha 10, 1837, kuFrancis noSara Shaw. Iindlalifa kwi-fortune enkulu, uFrancis Shaw wakhuthaza ngezizathu ezahlukahlukeneyo kunye noRobert wakhuliswa kwindawo ebandakanya ubuntu obufana noWilliam Lloyd Garrison, uCharles Sumner, uNathaniel Hawthorne kunye noRalph Waldo Emerson . Ngo-1846, intsapho yafudukela kwi-Staten Island, e-NY kwaye, nangona i-Unitarian, uRobert wabhaliswa eSt.
Isikolo sikaKatolika saseJohn College. Kwiminyaka emihlanu kamva, uShaws waya eYurophu waza uRobert waqhubela phambili izifundo zakhe ngaphandle.
URobert Gould Shaw - Omdala Omdala:
Ukubuyela ekhaya ngo-1855, wabhalisa eHarvard ngonyaka olandelayo. Emva kweminyaka emithathu eyunivesiti, uShaw wasuka eHarvard ukuze athathe isikhundla sikamalume wakhe, uHenry P. Sturgis, eqinekayo e-New York. Nangona wayekuthanda isi sixeko, wafumanisa ukuba akafanelekanga kumashishini. Ngoxa umnqweno wakhe emsebenzini wancipha, waba nomdla kwezopolitiko. Umncedisi ka- Abraham Lincoln , uShaw wayenethemba lokuba inkathazo ye-secession eyayiza kubona amazwe aseMzantsi abuyiselwe ngumkhosi okanye anqunyulwe e-United States.
URobert Gould Shaw - Imfazwe yasekuqaleni:
Ngoxinzelelo lwengqungquthela, uShaw wabhaliswa kwi-7 yaseNew York State Militia enethemba lokuba uza kubona into xa kuvela imfazwe. Ukulandela ukuhlaselwa kwe-Fort Sumter , i-NYS yesi-7 yasabela kwi-call ye-Lincoln yamavolontiya angama-75,000 ukubeka phantsi ukuvukela.
Uhambo oluya eWashington, igosa lalixhomekeke kwiCapitol. Ngoxa wayesesidolophini, uShaw wayenethuba lokuhlangabeza uNobhala kaRhulumente uWilliam Seward kunye noMongameli uLincoln. Njengoko i-NYS yesi-7 yayingumkhosi wexesha elifutshane nje, uShaw, owayenqwenela ukuhlala enkonzweni, afake isicelo sekhomishana esigxina kwinkunzi yaseMassachusetts.
Ngo-Meyi 11, ngo-1861, isicelo sakhe sanikezwa kwaye wathunyelwa njengommeli wesibini kwi-2nd Massachusetts Infantry. Ukubuyela ngasentla, uShaw wajoyina i-regiment kwiCamp Andrew eWest Roxbury ukuqeqeshwa. NgoJulayi, i-regiment yathunyelwa eMartinsburg, VA, kwaye ngokukhawuleza yajoyina iNational General Nathaniel Banks body. Ngonyaka ozayo, uShaw wakhonza entshonalanga eMalnand naseVirginia, kunye negorha ethatha inxaxheba ekuzameni uMongameli uGeneral Thomas "I-Stonewall" i-Jackson kwiphulo eShenandoah Valley. Ngexesha leMfazwe yokuQala yaseWinchester, uShaw wayenenhlanhla ukukhuselwa xa inkunzi ibetha umlindi wayo.
Emva kwexesha elifutshane, uShaw wanikezelwa isikhundla kwi-Brigadier General uGeorge H. Gordon owamkela. Emva kokuthatha inxaxheba kwi- Battle of Cedar Mountain ngo-Agasti 9, 1862, u-Shaw wakhuthazwa ukuba abe ngumphathi. Ngethuba i-2 yeMassachusetts yase-Massachusetts yabakho kwiMfazwe yesiBini iMassassas kamva kwinyanga leyo, yayibanjwe kwaye ayizange ibone isenzo. NgoSeptemba ka-17, izigqeba zikaGordon zazibona ukulwa okunzima kwi-East Woods ngexesha le- Battle of Antietam .
URobert Gould Shaw - I-54 eMassachusetts:
NgoFebruwari 2, 1863, uyise kaShaw wathola ileta evela eMassachusetts umbusi uJohan A.
UAndreya unikela uRobert umyalelo webutho lokuqala elimnyama eliphakanyisiwe eMntla, 54 eMassachusetts. UFrancis waya eVirginia waza wanikela ngonyana wakhe. Nangona ekuqaleni bexhala, uRobert ekugqibeleni wathonywa yintsapho yakhe ukuba yamkele. Ukufika eBoston ngoFebruwari 15, uShaw waqala ukuqesha ngokunyanisekileyo. Uncedwa nguLt Colonel Norwood Hallowell, igosa laqalisa ukuqeqeshwa kwiCamp Meigs. Nangona ekuqaleni bekungathembeki malunga neempawu zokulwa zerhulumente, ukuzinikezela kwamadoda nokuzinikela kwammchukumisa.
Ngo-Ephreli 17, 1863, uShaw watshata no-Anna Kneeland Haggerty wakhe waseNew York ngoMeyi 2. NgoMeyi 28, igosa lihamba ngeBoston, lixhamla isihlwele esikhulu, laqala uhambo lwayo ngasemzantsi. Ukufika kwi-Hilton Head, SC ngoJuni 3, i-regiment yaqala inkonzo kwiSebe eliMkhulu le-General General David Hunter.
Ngeveki emva kokuhamba, i-54 ithathe inxaxheba kuhlaselo lukaColonel James Montgomery kuDarien, GA. Ukuhlasela kwakumsindo uShaw njengoko uMontgomery wayala ukuba idolophu iphangiwe iphiswe. Ukungafuni ukuthatha inxaxheba, uShaw kunye no-54 bahlala bemi kwaye bebukele njengoko iziganeko zenzeka. Wathukuthelwa yizenzo zikaMontgomery, uShaw wabhalela uGov Andrew kunye nomphathi wecandelo lolawulo. NgoJuni 30, uShaw wafunda ukuba imikhosi yakhe yayiya kuhlawulwa ngaphantsi kwamajoni amhlophe. Engathandeki ngolu hlobo, uShaw waphefumlela amadoda akhe ukuba athabathe intlawulo yabo de kube yimeko yesisombululo (kuthathe iinyanga ezili-18).
Ukulandela izikhalazo zikaShaw malunga nokuhlaselwa kweDarien, uHunter waxhaswa waza wanyuswa nguMagosa Jikelele uGquincy Gillmore. Efuna ukuhlasela uCharleston, uGillmore waqala ukusebenza malunga nesiqithi saseMorris. Le nto yahamba kakuhle, nangona i-54 yayingenakunyuswa kakhulu kuShaw. Ekugqibeleni ngoJulayi 16, i-54 yabona isenzo kwiSixeko saseJames esikufutshane xa sisinceda ekuhlaseleni ukuhlaselwa kwe-Confederate. Ibutho lalwela kakuhle kwaye labonisa ukuba amajoni amnyama ayelingana nabamhlophe. Ukulandela le nyathelo, uGillmore uhlele ukuhlaselwa ku-Fort Wagner kwisiqithi sase-Morris.
Uzuko lwesimo sokukhokela ekuhlaselweni lunikezelwa kwi-54. Ngobusuku ngoJulayi 18, ekholelwa ukuba akayi kusinda kuhlaselo, uShaw wafuna u-Edward L. Pierce, intatheli e- New York Daily Tribune , kwaye wamnika iincwadi ezininzi kunye namaphepha akhe. Emva koko wabuyela kwi-regiment eyakhelwe ukuhlaselwa. Ukukhwela ngaphesheya kolwandle oluvulekileyo, i-54 yaba ngaphantsi komlilo ovela kubakhuseli be-Confederate njengoko beya kwi-fort.
Ngentambo yokugungqa, uShaw waphuma phambili ememeza esithi "Ngaphambi kwe-54!" waza wahola amadoda akhe njengoko ayala. Ukugqithisa ngodonga olujikeleze i-fort, i-54th yadibana neendonga. Ukufikela phezulu kwipaki, uShaw wema waza wancenga amadoda akhe phambili. Njengoko wababongoza wathi wadutshulwa ngentliziyo waza wabulawa. Nangona ubugorha bombutho uhlaselo lwaluxhatshazwa ngokubandezeleka kwama-272 ama-272 (i-45% yamandla ayo onke). Ethukuthelwe ngumsebenzi wamasosha amnyama, ii-Confederates zatshitshisa isidumbu sikaShaw zazingcwaba kunye namadoda akhe ekholelwa ukuba iya kuhlazisa imemori yakhe. Emva kokuzama kukaGillmore ukufumana umzimba kaShaw wehlulekile, uFrancis Shaw wamcela ukuba ayeke, ekholelwa ukuba unyana wakhe wayekhetha ukuphumla kunye namadoda akhe.
Ukungena kwii-Fuels eziNdleleni zikulungele
Indlela yokulinganisa i-Hygrometer
Indlela yokudibanisa isiNgesi esingaqhelekanga sesiFrentshi 'Vumela' ('Ukuvumela,' 'iMvume')
Isikhokelo seBallet yabantwana kunye nabazali
Indlela yokwenza uphando lwe-Intanethi ukufumana iMida ukusuka kwiingkondlo